Kushandiswa kwe 3D robhoti fiber laser yekucheka muchina mune indasitiri yemotokari
Iko kushandiswa kwe robhoti rinoshanduka laser kucheka mune yeindasitiri yemotokari kwawedzera, izvo zvisingaenzaniswi zvakabatana mukuvandudzwa kweiyo laser tekinoroji uye kuvandudzwa kwerobhoti chaiyo trajectory control tekinoroji. Pasi pemamiriro ezvinhu matsva, izvo zvinodiwa nevashandisi vemota ...Read more »
OREE mari chubhu Laser nokuveza muchina KANA-TL paIndaneti!
Post nguva: Sep-30-2019
OREE Laser akaita raparurwa mubato Series mari chubhu Laser nokuveza muchina KANA-TL chigadzirwa itsva. The X, Y uye Z akabatana shamhu zvawanzwa. Nepo rarinoshevedzwa chinyakare mashandiro anoita OR-T, kambani inopa vatengi siyana mutopota nokuveza michina mhinduro. The zvaunoda mutengo ane ...Read more »
OREE Laser KANA-PT chitarisiko ndiwedzere itsva
Post nguva: Sep-23-2019
Laser nokuveza Machine, ndiro uye chubhu hunyambiri-chinangwa Laser nokuveza muchina, ndiro chubhu zvakazara akanyudzwa Laser nokuveza muchina, itsva upgraded Laser okurwadzisa muchina. OREE Laser P dzakatevedzana Exchange chikuva chubhu uye chubhu hunyambiri-chinangwa internet Laser nokuveza muchina (OR-PT) nezve ndiwedzere itsva. ...Read more »
OREE ruoko-akabata Laser nomoto muchina OR-HW
Post nguva: Sep-04-2019
OREE Laser pamutemo asunungurwa ruoko-akabata Laser nomoto muchina KANA-HW. The ruoko-akabata nomoto muchina anochinja chinyakare nomoto nzira, vachishandisa mukuru-kuchinyanya Laser danda sezvo kupisa mabviro nomoto, uye kutsiva kare yatarwa Manyiminya nzira noruoko-akabata nomoto pfuti. Rine vakasuwa ...Read more »
Russian mutengi akabudirira akabata musangano
Post nguva: Aug-29-2019
KANA-FM3015 musangano wakanga vakabudirira rakaitwa zvinobudirira muRussia. The zvakasimba jira simbi goko uye workpiece kutongwa chakakwana chekawo kuti Akakwezva vateereri. Kutenga OREE Laser nokuveza muchina Isarudzo dzedu kupfuura kwakarurama. Kuwedzera OR-FM3015 kuchaita kunatsiridza processi ...Read more »
Post nguva: Jun-11-2018
Tikakumbira pfungwa vatengi dzedu kutsvaga Laser nokuveza michina, sezvo OREE Laser achaita kupinda Qingdao dzakawanda muchina Ezvemutauro inoratidzirwa muna August. This International Fair pamusoro Machine Tools uye Technologies nokuda Production - chinonyanya dzakawanda dzinoratidza kuti producti ...Read more »
2017 Seminar pamusoro Ji'nan Foreign Trade Enterprises
In 5TH Apr 2017, "2017 Seminar pamusoro Ji'nan Foreign dzaishandiswa emakambani" akanga akabata muna OYADE Group. Kune zvinopfuura 15 kambani vanopinda Seminar ichi chinangwa kuudza yokumwe zvokutengeserana ruzivo uye nemikana. Vazhinji vechikamu ndiwo CEO kana Sales Kumutungamiriri Chinotanga kambani iri manufactur ...Read more »
Ndichitarira shure June, 2017, Oree Laser zvakawanda pakukohwa uye Thanksgiving. Tinotenda zvose nemakasitoma, kuvonga nokuda kwedu tichivimba, Tinotenda wedu ose Oree Laser. Nokuda kwenyu, Oree Laser vane kukohwa zvakawanda. Tinotenda zvose chikamu Oree Laser, mupiro & D Oree Laser Man nokuzviremekedza kupa ...Read more »
The Middle Manager Construction Training pamusoro OYADE Group
Kuti pave pakati pakuvaka maneja, dzika "Kuhwina pakati" nzira, rechi12, June, comapny yedu koka China Human Resource Development Association muenzi hurukuro Lu Hualong akaita mharidzo iri muhofisi. All pakati nanager fomu OYADE Group uye nhumwa vanopinda farsiandwyr ...Read more »
Laser Cutting Advantages kubva Oree Laser
Laser nokuveza kwave zvinobetsera zvichienzaniswa nedzimwe tsika nokuveza mhando sezvo chave dzatangwa. On munyoro simbi, Stainless simbi, uye aruminiyamu yacho Laser nokuveza zvichiitika zvikuru zvakarurama, anopa rakaisvonaka akavezwa quality, ane kerf vashomashoma, (upamhi akagerwa kana buri) ane diki ...Read more »
FAQ pamusoro Laser Cutting Process kubva Oree Laser
Unogona kuwana chakaipa mhinduro pamusoro Laser nokuveza muchina uye Laser okurwadzisa rikurumidze. Working neBhaibheri Laser nokuveza chinhu zvemichina kuti anoshandisa Laser kudimbura zvokuvakisa, uye ari yemanyorero kushandiswa maindasitiri kugadzira zvikumbiro, asi ari kutanga kushandiswa muzvikoro, zviduku mabhizimusi ...Read more »